novembre 2018 - Page 3 sur 81 -
Saripika – Regards croisés : Hifindra eny Ankatso
Tafiditra amin’ny andiany faha-3 amin’ny fifaninanana sy ny fampirantiana. Hifindra ary hitohy eny Ankatso ny hetsika « Regards croisés sur l’Océan Indien » na azo adika hoe « Fijery mifanojo amin’ny ranomasimbe Indiana ». Nanomboka …Tohiny
« Milalaoo » : Kilalao mahafinaritra sady mampatahotra
Tsy natao ho an’ny misy tosi-dra. Mivoatra manaraka ny toetr’andro ny fialamboly eto Madagasikara. Raha mbola mahavariana ny ankamaroan’ny ankizy amin’ny faritra maro ny « Cheval de bois », dia efa miha-tonga tsikelikely eto amintsika …Tohiny
« Pop » sy « Electro » entin’ny tarika Rocky Tarika iray avy any Frantsa ny tarika Rocky ary mandalo eto Madagasikara. Hanolotra seho tokana etsy amin’ny Institut Français de Madagascar na ny IFM etsy …Tohiny
Tsy niandry ela. Sioka tokana tokoa mantsy no nataon’ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, amin’ny fanalàna na/sy fanesorana ny fako sy ny loto eto Antananarivo Renivohitra, dia nihetsika avokoa ireo tompon’andraikitra misahana izany ary nifanome …Tohiny
Tsy nitsanga-menatra. Medaly 12 no ka 6 volamena, 2 volafotsy ary 4 alimo no vokatra azon’ny mpiangaly ny taranja Kickboxing malagasy nandray anjara tamin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika ny 23 ka hatramin’ny 28 avrily teo ...Tohiny